IStarkvind yifomula ye-IKEA yokubuyisela izicoci zomoya | Iindaba zeGajethi
IStarkvind yifomula ye-IKEA yokubuyisela izicoci zomoya [Uhlalutyo]
UMiguel Hernandez | 29/11/2021 13:00 | ngokubanzi, Reviews
I-IKEA isebenza nzima kakhulu ukuphumeza iimveliso ezahlukeneyo ezinokubandakanya "i-basic home automation" yekhaya eliqhelekileyo. Ubungqina boku kukusebenzisana okungabalekiyo kunye neSonos esikwazile ukuphonononga ngaphambili, kunye nenguqulelo yabo yokuqala yesicoci somoya esifikelelekayo esithe savavanya.
Ngoku lixesha lokusulungekisa iimveliso, kwaye leyo ibiyeyona ngcamango iphambili nentsha IStarkvind, isicoci somoya esisebenza ngeendlela ezininzi esineempawu ezihambelanayo. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba yintoni le ikhethekileyo yokucoca umoya evela kwi-IKEA eyenza ezinye iibrendi zingcangcazele kule marike.
1 Izixhobo kunye noyilo: Kuya kuba nzima ukwazi ukuba sisicoci
2 INdibano kunye noqwalaselo
3 Izakhono zokucoca kunye neempawu zobugcisa
Izixhobo kunye noyilo: Kuya kuba nzima ukwazi ukuba sisicoci
Kwaye isihloko kweli candelo loyilo sesona sishwankathelo sesixhobo kwaye into endiyicingayo, ngokwembono yam ethobekileyo, yeyona ndawo ilungileyo. Kunzima ukwazi ukuba yintoni isihogo ukuba abakuxelelanga, kwaye kulungile, kuba yitafile. Njengoko sele sitshilo, itafile ekwaziyo ukuhlambulula umoya kwaye inenkqubo yokunyuka ye-IKEA yakudala oyithandayo, okanye uthiye. Ndifunde isifundo esibalulekileyo xa ndinika indlu yam, kufuneka uhlale uthenge i-IKEA screwdriver yombane, uya kufumana impilo kunye nexesha.
Imibala: Umdaka omnyama / oki oMhlophe
Iinguqulelo: Ngetafile edibeneyo / Kwimowudi yomntu
Imilinganiselo: 54 x 55 centimitha
Kodwa masingajiki kwaye siqhubeke sithethe ngeStarkvind, isicoci se-IKEA nangona singaphakathi imodeli yayo ye-euro eyi-149 ingaba yitafile esecaleni ye-54 x 55 cm, Sisenokuyithenga ngohlobo lwayo lwee-euro ezingama-99, oluyinqandayo ekubeni sisicoci esikhulu esinonyawo lwentsimbi lwakudala kwisitayile semodeli yangaphambili. Intambo ye-1,50 yeemitha idityaniswe komnye wemilenze (gcina loo nto engqondweni xa uyibeka) kwaye idibanisa kakuhle kakhulu kunye nokusingqongileyo, nangona kunjalo, le mida ngenxa yezizathu ezicacileyo indawo yetafile, ekufuneka ngokukhethekileyo ibekwe kufuphi ne eludongeni, okanye isofa ukuze ingabinayo intambo eyingozi ejingayo.
INdibano kunye noqwalaselo
Kolu kufakwa kuya kuxhomekeka kakhulu kumsebenzisi kunye nobuntu bakhe. Kwandithatha nje imizuzu eyi-10 ukugqiba amanyathelo ali-13. Itheyibhile inezikhonkwane ezisibhozo ezibekwe kunye nesitshixo sika-Allen esibandakanyiweyo kunye nesigqubuthelo esimilise ngokucofa, okushiyekileyo kungaphezulu komsebenzi wendibano yokucoca njengokubekwa kwezihluzi kunye neengcingo.
Ngokuphathelele uqwalaselo, olulula. Isihluzi sokuqala sele sidityanisiwe kodwa engxoweni, ngoko kufuneka sifikelele kwikhabhinethi kwaye siyihlawule. Emva kokuba senze oku, sibeka i-gas yesibini yokucoca i-gas filter onokuthi uyithenge ngokwahlukileyo kwi-€ 16 (ilungele ukuvumba).
Ngoku lixesha lokusebenzisa izinto ezizisebenzelayo zasekhaya. Le Starkvind inonxibelelwano kunye nenkqubo ye-IKEA Tradfri, ukuze sisebenze kwi-IKEA Home Smart application. Akufuneki ukuthetha, "ibhulorho" Tradfri kuyimfuneko ngokungqongqo kule nto. Silandela la manyathelo alandelayo:
Sivula isicelo kwaye ukhethe isixhobo
Sicofa iqhosha lokudibanisa xa siceliwe
Ngoku kufuneka siyidibanise ne-Apple's HomeKit okanye i-Alexa yeAmazon kwaye uyonwabele. Oku, ngendlela, imveliso yokuqala ye-IKEA Tradfri ukusebenzisa inkqubo yokubhanqa ngokuzenzekelayo ngale ndlela, kwaye yinto omele ube nombulelo ngayo.
Izakhono zokucoca kunye neempawu zobugcisa
Siqala ngeempawu ezisisiseko zobuchwephesha, esi sixhobo sikwanayo nemowudi ye-«automatic» enamagunya amahlanu ezandla aya kukhupha ingxolo ethile ngokuxhomekeke kumthamo wokucocwa:
Inqanaba 1: 24 db ye-50 m3
Inqanaba 2: 31 db ye-110 m3
Inqanaba 3: 42 db ye-180 m3
Inqanaba 4: 50 db ye-240 m3
Inqanaba 5: 53 db ye-260 m3
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, ukusetyenziswa kombane kwakhona iya kunyuka ngokuqhubekayo, phakathi kwe-3W kwimodi encinci kunye ne-33W kwimodi ephezulu. Ngendlela efanayo, sinoluhlu lwezinto esimele sizigcine.
Isihluzi sangaphambili: Ukucoca iiveki ezimbini ukuya kwezine
Inzwa yomgangatho womoya: Rhoqo kwiinyanga ezi-6
Isihluzi se-Particulate: Faka endaweni yakho qho kwiinyanga ezi-6
Isihluzi serhasi: Faka endaweni yakho qho kwiinyanga ezi-6
Imowudi ezenzekelayo Ngakolunye uhlangothi, iya kukhetha isantya se-fan ngokomgangatho womoya ngokubonga kwi-PM 2,5 meter particle. Ukutshintsha icebo lokucoca xa isilumkiso sivela kwiphaneli yolawulo, kufuneka sicinezele iqhosha elithi «reset» libekwe ngaphakathi, kangangemizuzwana emithathu de isalathisi sicime.
Njengoko sesitshilo, isihluzo esiqhelekileyo sisetyenziselwa ukususa uthuli, i-pollen kunye nezinye izinto ezibangelwa ngumoya (PM 2,5). Ngokwenxalenye yayo, isihluzo segesi sivumela ukuba sisuse umsi, iigesi kunye nevumba elingakumbi, i-accessory ethengiswa ngokwahlukileyo kwaye ngokombono wam kuyimfuneko, Ewe, ngaphandle kwayo sivinjwa enye yeempawu ezichanekileyo kum eyona nto inomdla kwezi zicoci, ezo zevumba. Ngamaxesha abandayo kuyathakazelisa ukukwazi "ukukhupha umoya" kwindlu ngaphandle kokuvula nayiphi na iifestile, ukugqithiswa kwentsasa kunye nephunga elicocekileyo elingenakuchazwa libonwa.
Njengenzuzo, sinoyilo lodwa IKEA iye yakwazi ukunikela ukuza kuthi ga ngoku kwaye oko kusikhulula ekubeni sigwebe ukubekwa komcoci, nto leyo ngamaxesha amaninzi isizathu esenza ukuba siphephe ukuza ekhaya. Ngoku kuya kufuneka sitshintshe enye yeetafile zethu ezisecaleni ngale Starkvind kwaye sinesibini-kwinye. Olu luyilo lusebenza kakuhle ngakumbi ngala makhaya ahonjiswe ngezinto ze-IKEA, kodwa angathathi hlangothi, Abayi kungqubana kwiisetingi ezininzi kwaye iyenza ilunge nakwiiofisi.
Ngokokwaneliseka, sifumene ukusebenza kakuhle kokubini ngokusulungekiswa komoya kunye nokuphelisa ivumba, kukhatshwa ludibaniso olupheleleyo kunye nezinye izinto ezizisebenzelayo zasekhaya kunye ne-IKEA ngokwayo njengoko. le mfama ikrelekrele ukuba sele sivavanye ngaphambili. Okwangoku, i-Starkvind yee-euro ezili-159 ibonakala kum yenye indlela endinokuyiqwalasela.
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 29 ukusuka kwi2021
Utshintsho lokugqibela: NgoNovemba 27 ukusuka kwi2021
Ukudibanisa kunye ne-automation yasekhaya
Izakhono zokucoca kunye nokulula
Ifuna ibhulorho yeTradfri
Inguqulelo ngaphandle kwetafile ayithandeki kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » IStarkvind yifomula ye-IKEA yokubuyisela izicoci zomoya [Uhlalutyo]
IHuawei Watch GT3 kukungcwaliswa kwefomula eyimpumelelo [Uhlalutyo]
I-Dreame L10 Pro: uphononongo, ixabiso kunye neempawu